Lava indrindra Journey By Electric Skateboard - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Izany dia midika hoe manatrika ny teboka eo amin'izay sendra manao fanavaozana lehibe mba hiavaka ao anatin'ny faritra skateboard ny herinaratra; safidy toy ny regenerative braking sy in-kodia Motors. Ny fanaraha-maso lavitra Wireless azo nieritreritra kely ny malemy anivon'ny tahaka ny vita tamin'ny plastika kely namboariny ary mahatsapa somary mora. Matetika, ny mpitaingina amin'ny elektrika skateboard dia handidy ny birao, ary izany ny manomboka miasa eo amin'ny lalambe miaraka amin'ny fitantanana lavitra manao azy hifehy sy mandrindra ny haingana. Mba miadana ianao manosika ny trigger mandroso ao amin'ny handheld lavitra. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny hany zavatra tokony ho vita dia ny handeha any amin'ny toerana izay Crouch, ka dia misakana anareo tsy hahazo loza dia tokony lavo. Inona no mampiavaka azy io dia nitaingina fanampiny crazier sy mahafinaritra no marina fa afaka manatrika ilay havoana, ary downhill tsy misy olana, ka ianao ho afaka ny handeha izany na aiza na aiza tianao. Ny kokoa ny KV, ny haingana nyherinaratra skateboardhandroahako. Ny kodiarana izany herinaratra skateboard dia vita amin'ny fingotra, izay azo ampiasaina amin'ny misy karazana lalana.
Ary tsy mitsaha-mitombo isan-karazany ny herinaratra skateboards tout ny dian'ny (ny sasany hanao tsara anefa maherin'ny 20 kilaometatra isan'ora), fifadian-kanina haingana, maro mitaingina fomba, ary sturdiness rehefa nataony araka ny feno Nivezivezy eran'ny na nesorina-arabe. Koa raha misy olona mitaky Nitoetra ihany ny mora indrindra, dia KOOWHEEL skateboards herinaratra no hihaona ny fangatahana. Noho izany, fa ao an-tsaina foana, amin'ny ankapobeny dia efa faly hijery ny Koowheel herinaratra skateboard taranaka faharoa Kooboard nanamafy niakatra avy tao. Ny voalohany herinaratra skateboard ho fampiharana ny fiarovana lafin-javatra maro ho an'ny fiarovana ny mpitaingina azy.
Raha ny marina, ny nanapaka regenerative dia rafitra izay vidiny ny bateria. Izahay herinaratra skateboardgeeks. Fa am-polony tapitrisa ny mpandeha an-tongotra, ny skateboard dia mahafinaritra sy mirindra safidy lava be lavitra nita faingana, ka Mitandrema ny amin'ny fahasorenana ny gridlocked fifamoivoizana na hipoka sy tsy mahomby fitateram-bahoaka. Saingy, misy ny ambony rehetra lafy ratsiny, ary izany indrindra ny raharaha eto. Rehefa avy nandany akaikin'ny 200 ora fikarohana ny mahomby indrindra marika sy ny modely eny an-tsena, dia nividy teo an-tampon'ny 10 zana-kazo eny an-tsena tsara izao fotoana izao, ary nandinika azy ireo lafiny-by-lafiny hisafo avy izay e-skateboard tena torolalana izy rehetra! Raha te-hahita tsara ny iray, i Shina no toerana mba hijery. Nefa fandaharana ao amin'ny toerana mampidi-doza hamerana rehefa niakatra ny inclines, ny mpitaingina azy dia tsy maintsy mahatakatra ny fahaizana birao afaka manome izany dia tsy maintsy hajaina ny fampiasana voaaro. Na izany aza, dia amin'ny fotoana rehetra ny tena tsara drafitra mba hanamarina teratany torolalana sy fitsipika momba ny mitaingina ny birao raha handeha hiaraka aminy ary hamela be dia be ho an'ny fiarovana fanampiny fotoana raha ho dia miaraka amin'ny E-skateboard. Mitaky ihany dimy amby efa-polo minitra lafo ny birao amin'ny dovia ny velona.
Post fotoana: Feb-23-2018